Kutanga unboxing yeiyo iPhone 7 Jet Nhema uye bhokisi rakakosha | IPhone nhau
Kutanga unboxing yeiyo iPhone 7 Jet Nhema uye bhokisi rakakosha
Luis Padilla | | iPhone 7, dzakawanda
Iwo ekutanga mayuniti eiyo iPhone 7 ari kutanga kusvika kune vanogovanisa uye vamwe vanotsunga kutumira mapikicha eaya anokosha madhizaini, kunyangwe Apple yakasimba mirawo pane iyi nyaya. Kutenda kune mutengesi weChinese, kwete chete isu chete patinogona kuona yekutanga unboxing yeiyo iPhone 7, asi iye aburitsa pachena izvo kusvika zvino zvisingazivikanwe: iro bhokisi reiyo Jet Dema modhi, yakasvibira inopenya nhema, ichave yakasiyana kubva kune vamwe, yakafanana neiyo yazvino Apple TV bhokisi, yakasviba chose, apo bhokisi remamwe mamodheru richange rachena nemagadzirirwo akafanana neakaitika makore apfuura. Isu tinokuratidza mamwe mafoto eisina unboxing mukati.
Mushure mekucherechedzwa kwakabhadharwa muKeynote mharidzo iyo Apple yakatiratidza zvese zvekupedzisira zveyakaomesesa nzira yekukwiza iyo iPhone kuti iite kupenya kwakapenya, hazvishamise kuti kambani yaida kugadzirira yakakosha kurongedza iyo modhi ye iPhone, imwe yeinonyanya kudiwa kubvira kutanga kwekuchengetwa kwe iPhone asi imwe yeinonyanya kushomeka, nemisi yekuendesa iyo kubva panguva yekutanga inopfuura vhiki mushure meGunyana 16, uye nekukurumidza yakasvika munaNovember. Zvinogona zvakare kuve kuti Apple yaida kuita kuti basa rive nyore kune vatengesi uye nekudaro inokwanisa kusiyanisa nyore nyore iyo Jet Nhema modhi kubva kune matte nhema modhi., iyo yakafanana nemamwe mavara (sirivheri, goridhe uye pingi) inouya mubhokisi chena rekare.
Inotevera Chishanu, Gunyana 16, kutengeswa kweiyo iPhone 7 uye 7 Plus kunotanga muzvitoro zvepanyama. Kugadzirira zvakaitika nekuchengetedza, zvinotarisirwa kuti kuwanikwa kweiyo nyowani Apple smartphone muzvitoro kuchave kushoma, uye kuti mhando dzinonyanya kudiwa dzichazotengeswa, idzo dzine 32GB kugona mumavara ese, kunyanya mune nyowani matte nhema. iyo iri kutsvaira. Zvinoenderana neongororo yatiri kuitisa munhaurirano yedu yeTeregiramu, nhema inopenya iri padyo nematte matema, kunyangwe hazvo ichitozivikanwa kuti chichava chigadzirwa chisina kusimba uye kuti mutengo wayo wakakwirirawo, sezvo uchitanga pa 128GB chinzvimbo. Tichakamirira, tinokusiya iwe nemamwe mapikicha mune inotevera gallery.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Kutanga unboxing yeiyo iPhone 7 Jet Nhema uye bhokisi rakakosha
Mhoroi vanhu vese, endai nemaChinese, sezvavanofungidzira, kubva kumifananidzo ini ndinogona kupika kuti ndiyo BHUKU modhi, kwete iyo jet nhema.
Pindura kuna michael
Dany Nattramn akadaro
Inoita kunge yakanaka foni asi zvakadaro mutengo wacho wakanyanyisa uye havasi vazhinji vanozogona kuutenga, kwandiri ndine iPhone 6 pamwe uye ndiyo yekutanga iPhone yandinayo kubvira ndagara ndiine Android uye iPhone yakanaka asi ini ndinoomerera kuti mutengo weiyo iPhone 7 unodarika maonero angu uye kwete angu chete asi eawo mazhinji, kwaziso.
Pindura Dany Nattramn
Nguva dzese pavanowedzeredzwa zvakanyanya uye nezvakawanda, zveizvozvo, hapana mubvunzo. Iyo nguva ichauya apo kutengesa kuchatanga kunyatsoderera. Asi chero bedzi vanhu vachiramba vachitenga, hazvisi kuzoitika.
Iyo iPhone haitengeswe seimwewo foni. Inotengeswa (ndoda) sekunge yaive yekuwedzera yemuviri wedu. Icho chigadzirwa chinounza yakawanda chishuwo. Apple iyoyo inonyatsoziva.
Chaizvoizvo, icho chigadzirwa chandisina chokwadi nazvo, rega kutengesa ...
Iyi kambani inobata nekutengesa kwayo uye chaizvo.
Pindura kuna Alejandro
Haisi jet nhema, ndeye matte.
Super Mario zvimiti zveMessage zvinosvika pane iOS 10 kuvhura zuva
iTunes Mafirimu anoshandura gumi uye Apple anoipemberera nekudzikisa mutengo kusvika kumadhora gumi emamwe mafirimu muUnited States